Ekujoliswe kuko, Nceda utshixe iiSuti zeNkukhu | Martech Zone
Ekujoliswe kuko, Nceda uvale isuti yenkukhu
NgoMvulo, Oktobha 2, 2006 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Umyalezo ovulekileyo oya kwiithagethi:
Nceda ungazishiyi kwindawo evulekileyo ngexesha leHalloween.
Nceda ungazishiyi iisuti zakho zenkukhu kwindawo ethile apho umntu anokuyibeka ngaphandle kokufunyanwa.
Nceda ungazishiyi iisuti zakho zenkukhu apho umntu oneminyaka eli-17 ubudala anokufumana khona izandla.
Nceda ungazishiyi iisuti zakho zenkukhu apho utata anokubheja unyana wakhe oneminyaka eli-17 ubudala i-5 yedola ukubeka i-Chicken Suit kwaye athabathe umjikelo ajikeleze yonke i-Super Target…
kuvuyo lwabantwana abancinci bekhwaza besithi, “Mama… jonga… yindoda eyiNkukhu!”.
Nceda ubeke iiSuti zeNkukhu. Ngaphandle kokuba ufuna ukuba utata oneminyaka eli-17 ubudala ahleke kakhulu angafa sisifo sentliziyo nanjengoko unyana wakhe ebetha iingalo zakhe zeNkukhu kwaye ebaleka ezehlela ngaphambili kwivenkile.
Ekujoliswe kuko, nceda uzivalele iisuti zenkukhu.
Douglas Karr Monday, October 2, 2006 Sunday, September 30, 2012
Yibhiliyoni enye yeedola zeYouTube? Ingayiyo.
Oktobha 2, 2006 ngo-8: 36 PM
Mhlawumbi wenza inkukhu ebhetele kunomfo omi ngaphandle kwendawo yokupaka iimoto esixekweni rhoqo kusasa ehambisa amaphetshana. Ewe – enxibe isuti yenkukhu.
Okt 3, 2006 ngexesha 9:31 AM
Lonto i-WESOME. Kufuneka kubekho ividiyo kule nto?!?!?! Nceda uBill, uthi ukwazile ukufumana ividiyo yale nto?!?!?
Oktobha 3, 2006 ngo-4: 52 PM
Ngaba ungutata oneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala onxibe isuti yenkukhu owenza abantwana bahleke ngovuyo, Douglas? Oko kungcono kunoSanta Claus!
Oktobha 3, 2006 ngo-10: 59 PM
Ewe, ndim utata. Ibingunyana wam lowo, ityala.
Oktobha 4, 2006 ngo-2: 02 PM
Bendingavuya ukuyibona. Inkwenkwe yam endala ngekhe ifune isuti yenkukhu, kodwa hayi ezinye ezimbini.